FAMPAHALALANA MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SY ALIKA - ALIKA
Alika avy amin'ny mpanjaka Charles Spaniel / Cocker Spaniel, alika mifangaro
'Sputnik dia vehivavy Cockalier 2 taona 2 taona. Manana toetra mahafinaritra sy milalao izy, saingy tena tiany ny mipetraka eo am-pofoana ary manosotra ny kibony. Tena manan-tsaina izy ary afaka mora foana fahatsapana toe-po sy fihetsem-po . Malemy fanahy tokoa i Sputnik, tia milalao alika hafa izy, na inona na inona habe. Mpinamana be izy ary manintona ny sain'ny olona rehetra mifandray aminy. '
Tsy alika madio ny Cockalier. Lakroa misy eo anelanelan'ny Mpanjaka Charles Spaniel, Cavalier ary ny Cocker Spaniel . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Drafitra mpamorona endrika = Spaniel Cockalier
Designer Dogs Kennel Club = Spaniel Cockalier
Mpanoratra International Canine Registry®= Espaniôla Cockalier
'Pebbles the Cockalier at 1½ years old (Cavalier King Charles Spaniel / Cocker Spaniel mix dog) - ny hetahetany dia ny manenjika ireo mpanakorontana manodidina. Tiany ny mandeha any zaridaina alika sy farihy alika. Pebbles dia te-hanoroka ary indraindray handray ny fehikibony ary 'handeha' ny tenany. Tena tsara izy manana manodidina ny trano. '
Scarlet the Cockalier (alika mifangaro Cavalier / Cocker mix) - 'Scarlet no alika be fitiavana hitako indrindra ary tena hanaiky alika hafa amin'ity hybrid ity aho.'
Tanner ilay Cockalier 7 volana - 'Ny reniny dia Cocker Spaniel miloko volom-borona ary ny rainy dia Mpanjaka Cavalier Charles Spaniel miloko telo. Ny ray aman-drenin'i Tanner dia eo amin'ny lafiny kely kokoa, noho izany dia heveriko fa tsy ho lehibe izy. Manana toetra Cocker sy Cavalier izy. Na dia afaka mivoaka toa ny alika aza ny alika toy ny iray amin'ireo karazany ampiarahina aminy, dia toa mpanelanelana amin'ny fifaliana i Tanner! '
Tanner ilay Cockalier 7 volana
Zavatra mpiandry marokoroko collie Mix
Otis the Cockalier amin'ny 10 volana - hoy ny tompony, 'Alika lehibe ny alikanay, milanja mihoatra ny 30 pounds amin'ny 10 volana. Vao haingana izy no nahazo taovolo 'Cocker sporty' satria nahatsapa ny mpihary fa ny endriny dia Cocker kokoa noho i Cavalier. '
Otis the Cockalier amin'ny faha-7 volana
cane corso pitbull afangaro alika kely amidy
Buca the Cockalier amin'ny faha-5 taonany— 'Sambuca zanakay vavy ity. Buca raha fintinina. Tiany ny manoroka sy mamihina. Tiany ny mijery squirrels tontolo andro eo am-baravarankely. '
Otis the Cockalier dia manana toetra tsara, tiany milomano ary tena milalao ankizy.
Regal the Cockalier amin'ny faha-4 volana— 'Salama, mamy ary mora ampiofanina izy noho ny fahaizany avo sy ny fanarahan-dalàna. Toa manana ny tsara indrindra amin'ny karazana spaniel namana izy. '
Regal ilay Cockalier afaka 11 volana — jereo fa mena volo!
Hijery ohatra hafa momba ny Cockalier
Sarin'ny Cockalier 1
palitao amerikana tery mifono wheater teratany
alika kely mpiandry ondry anglisy sy mainty
alika fotsy misy orona mavokely